टेबल नम्बर १३ | कथा | रूपेश भट्टराई | दशैं साहित्य विशेष
टेबल नम्बर १३
“दरबार भ्यु रेस्टुरेन्टको छतको कुनै टेबलमा बसिराख, म एकैछिनमा आइपुग्छु”, काठमाण्डूले मलाई पठाएको मेसेजमा लेखिएको थियो ।
वसन्तपुर डबलीमा आएर मैले एकैछिन यो क्याफे खोजें र भेटेपछि छतमा आएर सुरुक्क टेबल नम्बर १३ मा बसें । यहाँबाट शहरको एक चौथाइ प्रष्ट देखिंदो रहेछ ।
त्यही एक चौथाइमा म उसलाई खोज्न थाल्छु । तल डबलीमा झिलीमिली मान्छेहरू छन् । क्यामेराले आफ्नो अनुहार, पछाडिको दरबार, र त्यसमाथिको सुन्तले आकाश खिच्ने कोशिश गर्दै गरेका एक लहर मानिस छल्दै बीचबाट अघि बढ्दै गरेको एउटा अनुहार उसको हो कि जस्तो लाग्छ । साँझ छिप्पिनुअघि एक थर्मस चिया बिकाइसक्ने यत्नमा लागेका अर्का लहरको थर्मस छलेर हिंड्दै गरेको कुनै खुट्टा उसको हो कि भन्ठान्छु ।
उसलाई खोज्दा खोज्दै मेरा आँखाहरू यो साँझको दृश्यमा हराउँछन् । डबली पछाडि साँझको चिसो बतास थेगेर सबैमाथि कृपा नजर राख्दै एउटी देउता, देउताको मन्दिरको आँगन पेलेर लगाइएको शहरका घरहरूको पर्खाल, अनि एउटा विशाल अनकण्टार खैरो झाडी, त्यसको पुच्छरमा रहेको डाँडाको गर्भसम्म उछिट्टिएका सिमेन् (ट) का छिटाहरू, जहाँबाट छिटै जन्मिनेछन् कंक्रिट बच्चाहरू ।
टेबल नं. ७ मा पूर्वीय दर्शनको बाटो पहिल्याउन आएका केही युरोपेली, जो दिनभरिको ट्राफिक जामहरूले रनभुल्लमा परेका जस्तो देखिन्छन् ।
केहीबेरमा काठमाण्डू हस्याङ–फस्याङ गर्दै पाँच तलाको भर्‌याङ्गलाई हराएर छतमा आइपुग्छ । धूलै धूलो भएको हेल्मेट निकाल्छ, अनि मुस्कुराउँदै म भएतिर आउँछ । हेल्मेट छेउको कुर्सीमा राख्छ, ज्याकेट फुकाल्छ, धूलो टकटक्याउँछ ।
शरदका फूलहरूको पराग र थोत्रा डिजलगाडीको धुवाँको राग केहीबेरसम्म हाम्रो टेबलमा रहिरहन्छन् । केही बेर आफ्नो गुजुल्टिएको कपाल मिलाइसकेपछि काठमाण्डू फेरि मलाई हेरेर मुस्कुराउछ ।
“धेरै बेर कुराएँ ? म त बाटै बिर्सेर कहाँ पुगेछु । एकछिन असनमै हराएँ”, ऊ सोध्छ ।
“अँ । तर ठीकै छ । म पनि हराउन पाएँ एकछिन”, म भन्छु ।
शहरमा हराउन सजिलो छ, तर हराउने साइत जुराउन भने गाह्रो छ । मैले
आफू हराउने समय पाउन कि त छुट्टीको दिन कुरेर शहरबाट कतै बाहिर भाग्नुपर्छ, कि कुनै साँझ कतै कसैलाई पर्खेर बस्नुपर्छ ।
“काठमाण्डू, तिमीले मलाई कसरी चिन्यौ ?” मैले भनें कि भनिनँ यो हाम्रो पहिलो भेट हो भनेर ?
“तिमीलाई मैले देखिराखेको हो नि ! बोल्न मात्र आँट नगरेको । म पहिलो पल्ट कार्यविनायकको बस चढेर भैंसेपाटी गएको थिएँ, ड्राइभरको छेउमा तातो इन्जिन माथि बसेर, अनि तिमी पनि त्यही बसको ढोकामा झुण्डिरा’को थियौ । एकचोटि मेरो बाइकको ऐनामा देखेको थिएँ तिमीलाई । तिमी तिम्रो भाइको स्कुटर पछाडि बसेर शहरका तस्वीरहरू खिच्दै थियौ शायद, फोटो खोजेर हेर्‌यौ भने मेरो बाइक देख्छौ होला, अलि जूम गरेर हेर्‌यौ भने मैले बाइकको ऐनाबाट गिज्याइराखेको पनि देख्छौ होला, हाहा । बानेश्वरका चियापसलमा कतिचोटि तिमी र तिम्रा साथीहरू बसिरहेको बेला बस्ने ठाउँ नपाएर फर्केको छु म, अनि कति चोटि म बसिरहेको बेला ठाउँ नपाएर तिमी फर्केको छौ । तिमीले चैं मलाई कसरी चिन्यौ ?”
“मैले पनि देखिराको हो तिमीलाई । बोल्ने आँट मात्र नगरेको”, म भन्छु ।
टेबल नं. ७ का युरोपेलीहरूलाई नेपाली मःमः ल्याइदिंदै गर्दा बल्ल वेट्रेसले हामीलाई देख्छिन् । र हत्तारिंदै मेनु बोकेर टेबलमा आइपुग्छिन् ।
“हाम्रो अर्डर भयो ?” उनी सोध्छिन् ।
“छैन नि” काठमाण्डू उनलाई हेर्दै भन्छ ।
वेट्रेसको अनुहार एक्कासी रातो हुन्छ ।
“तपाइँलाई यहाँ भेटौंला भनेर मैले सोचेकै थिइनँ । तपाईंहरू मेनु हेर्दै गर्नुहोला म आइहालें”, आफूलाई सम्हाल्नै नसक्ने गरी उनी दौडन्छिन् ।
म काठमाण्डूलाई ट्वाल्ल परेर हेर्छु । ऊ नाकबाट हावाको एक झोंका निकालेर हाँस्छ, अनि भन्छ, “म हट लेमन खान्छु, तिमी ?”
“म पनि, तर हनी हाल्न भन है ?” म जवाफ दिन्छु ।
मैले भर्खरै के भएको थियो, किन वेट्रेस एकाएक दौडिइन भनेर सोध्न नपाउँदै हाम्रो अघि उनी देखापर्छिन् ।
वेट्रेसको हातमा एउटा किताब छ, अनुहारमा पसिना ।
“तपाईं त मेरो फेभरेट नेपाली लेखक हो नि । यो किताब मैले मेरो साथीको लागि किनेको हुँ, एउटा छोटो मेसेज लेखिदिनुहुन्छ प्लिज ?” यति भनिरहँदा उनको स्वाँ–स्वाँ सकिएकै थिएन ।
“स्योर, बस्नुस् न”, कुर्सीको हेल्मेट हटाएर टेबलको कुनामा राखेर काठमाण्डू इशारा गर्छ ।
“हैन ठीकै छ”, उनी भन्छिन् । काठमाण्डूले किताब लिएपछि मैले कभर हेर्छु, अगाडि सेतो पर्दामा ‘तिम्रो शहरका कथाहरू’ लेखिएको छ, मुनि गज्याङगुजुङ तारहरूको चित्र छ । पछाडि उसको नाम र फोटो ।
“नाम के नि तपाइँको साथीको ?”
“किरण, तर पिकाचु लेखिदिनुस् न है ?”
काठमाण्डूले पहिलो पानामा केही लेखिदिन्छ ।
“एकैछिन है ?” ऊ किताबको बीचतिर पल्टाउन थाल्छ । र, बीचका केही पानाहरू ध्वार्र च्यात्नथाल्छ ।
म छक्क पर्छु, वेट्रेस पनि अचम्म पर्छिन् ।
“यो कथा मैले नछाप्नुपर्ने हो, सरी, तर यो कथा नछापिनुपर्ने नै हो”, ऊ भने स्वभाविक देखिन्छ ।
किताब फर्काउँदै हाम्रो अर्डर टिपाउँछ । उनी अकमक्क फर्किन्छिन् ।
“तिमीले किताब पनि लेखिसकेको रहेछौ । मलाई त थाहा थिएन”, म भन्छु ।
“एउटै किताब हो । मन पराउलान् जस्तो लागेको थिएन, चिट्ठा लाग्यो । तर तिमी मलाई लेखक भनेर नचिन ।”
“ठिक छ, तर मलाई जान्न मन लाग्यो, के लेख्छौ तिमी ?”
“भविष्यका कथाहरू ।”
“साइन्स फिक्सन ?”
“ठ्याक्कै चैं हैन तर भन्न पाइयो ।”
हामी केही बोल्दैनौं । साँझ छिप्पिंदैछ । हाम्रो हट लेमन आइपुग्छ । यसपालि अर्कै वेटर देखिन्छ ।
“के हुन मन छ त तिमीलाई, लेखक नभए ?” म तातो कागती र महको चुस्की लिंदै सोध्छु ।
“साँच्चै भनौं ?”
म सहमतिमा टाउको हल्लाउँछु ।
“मलाई एउटा ठूलो घर बन्न मन छ । सबैका लागि खुल्ला । अग्लो छाना, ठूला झ्यालहरू अनि उज्याला भित्ताहरू भएको । घरभरि आरामदायी कुर्सी, सोफा, अनि ढल्केर बस्न नरम खटियाहरू भएको । अनि घरभरि दराजहरू होउन् । जसभित्र मेरा अलि अलि खुशीहरू आइरन गरिवरी पट्याएर राखिएका होउन् । जतनले जोडेका अलेलि दुःखहरू मखमलीको थैलीमा राखिएका होउन् । मीठा कथाहरू रंगीचंगी बोतलभित्र जोगाएर राखेका होउन् । ठट्यौलीहरू यताउता कोचिएका होउन् । अनि सबै मेरो घरमा आएर आफ्ना सुख–दुःख साटा–साट गर्न सकुन्, केही पैंचो पनि लान सकुन् । हुन्छ नि ? शहरका धेरै घरहरू कि त भाडामा छन्, कि त बिक्रीमा । मलाई सित्तैंको छहारी हुन मन छ ।
तर मलाई बेघर पनि हुन मन छ । कुनै ठूलो खोला बगरको चौरमा लम्पसार परेर हात र खुट्टाले भ्याउने जति घाँसलाई अँगालेर सुत्न मन छ, लामो रूखको ओसिएको मुढा जस्तै । अनि निद्रामै बगेर ब्युँझदा आफूलाई कुनै समुद्रमा तैरिरहेको भेट्टाउन मन छ । मलाई समुद्र पनि हुन मन छ, खोला पनि । मलाई घर पनि हुन मन छ अनि बेघर पनि” काठमाण्डू भन्छ । उसले आफ्नो भागको हट लेमन आधा सकिसक्यो ।
“तिमी समुद्र थियौ, अहिले खोला हौ । तिम्रो घर त छ तर तिमी बेघर नि छौ”, म भन्छु ।
“शायद”, काठमाण्डू हाम्रो टेबल टाँसिएको पर्खालमा लागेको लेउलाई नङले कोट्याउँदै भन्छ, “तिमीलाई चैं के हुन मन छ ?”
“मलाई एउटा लाऽऽमो डोरीमा खुट्टा बाँधिएको चरा हुन मन छ । आकाशमा पुग्न मन छ तर धर्ती बिर्सिनु पनि छैन” म भन्छु ।
“मतलब, चङ्गा ?”
“शायद, तर आफ्नै पाराले उड्न सक्ने चङ्गा । हावाको आदेश मान्नु नपर्ने चङ्गा”, म भन्छु ।
दक्षिणबाट शीतल हावा लाग्छ ।
“ओहो ! दशैं हावा ! थाहा पायौ ?” काठमाण्डू उत्साहित हुँदै भन्छ ।
“कसरी थाहा पाउने, दशैं हावा ?” म मेरो अन्तिम घुट्को सिध्याउँछु ।
“त्यो बास्ना आएन ? नयाँ लुगा, नयाँ मसला, बल्ल बल्ल सुस्ताएकाहरूको तातो पसिना ।” ऊ कुकुरको छाउरोले हावा सुँघे जस्तै गरी नाक चलाउँछ ।
त्यहीबेला मेरो नाकले भने गाँजाको धुवाँको गन्ध चाल पाउँछ, शायद त्यो टेबल नं. ७ बाट आएको हुनुपर्छ ।
“तिमी के हौ काठमाण्डू ?” म साँझको अन्तिम प्रश्नहरूमध्ये एक सोध्छु र बिल मगाउँछु ।
“म मञ्च हूँ । मलाई सेरोफेरो बनाएर फरक फरक समयमा फरक नाटक प्रस्तुत गरिन्छन् । कहिले कोही मेगाफोन बोकेर आउँछन् र राजनीतिक परिवर्तनको नाटक मन्चन गर्छन् । त्यतिबेला म नुहाईधुवाई चिटिक्क परेर बसिदिन्छु । कहिले ठगिएकाहरूको जुलूस मसाल बोकेर आउँछ । म कुनामा टुक्रुक्क बसेर रोइदिन्छु । कहिले चाडबाड आउँछन्, घर–घरबाट जात्रा निस्कन्छन् । म पनि घरबाट निस्केर छमछमी नाचिदिन्छु । कहिले भीड तितरवितर पार्नेहरू पानीको फोहोराले मागहरू पखाल्न आइपुग्छन् । कफ्र्यू लाग्छ अनि म घरमा थुनिएर सुतिदिन्छु । म नेपथ्य हूँ ।”
बिल तिर्दै ऊ भन्छ, “तिमी चैं के हौ ?”
“म दर्शक हुँ, शायद”, म भन्छु ।
“हैन, तिमी पात्र हौ । तिमीलाई थाहा मात्र छैन” यति भन्दैं ऊ किताबका ति पानाहरु मेरो हातमा थमाइदिन्छ, जुन अघि उसले च्यातेको थियो ।
म ति च्यातिएका पानालाई जोड्ने अनि त्यहाँ लेखिएका शब्द पढ्ने प्रयत्न गर्छु ।
“टेबल नं. १३”
वसन्तपुर डबलीमा आएर मैले एकैछिन यो क्याफे खोजें र भेटेपछि छतमा आएर सुरुक्क टेबल नम्बर ३ मा बसें । यहाँ बाट शहरको एक चौथाइ प्रष्ट देखिंदो रहेछ ...”
आश्चर्यले भरिएको म हत्तपत्त टाउको उठाउँछु, काठमाण्डू त्यहाँ थिएन । ऊ बसेको कुर्सी त खालि छ । यस्तो खालि कि अघिदेखि त्यहाँ कोही बसेकै थिएन ।
आकाशको एक कुनामा सानो सुनौलो चन्द्रमाको आधा अनुहार छ, आधा टोकेर छाडिदिएको असर्फीको टुक्रा जस्तो । चन्द्रमाको छेउमा मसिनो रातो मंगल ग्रह टल्किरहेको छ । तलबाट आकाशको कालो भुइँमा भित्ता पुछ्दा पोखिएको कमेरो जस्तो देखिने बादल बग्दैछ । त्योभन्दा तल बिजुलीले धपक्क बलेको लामो ट्युबलाइट जस्तो क्षितिज छ । झण्डै झण्डै क्षितिजकै हाराहारीमा अग्ला कम्प्लेक्सहरूका बत्तीहरू एकपछि अर्को निभ्दैछन् ।
शहरमा मन्द दशैं हावा चल्दैछ । म शहरलाई हेर्दैछु । शायद शहर पनि मलाई हेर्दै छ ।